ကျော်ထက်ဝင်း နည်းပညာ တက္ကသိုလ် ဘားအံ နှင့် ဇွဲကပင်မြေ Technological University Hpa-an: The Best Links - Policy andm Technology
The Best Links - Policy andm Technology
www.slip-meepyatite.blogspot.com/ = SLIP MEE PYA TITE= ကွန်ပျူတာနည်းပညာများလေ့လာရန်။
http://www.meepyatite.info/ = မီးပြတိုက်= ကွန်ပျူတာနည်းပညာနှင့်အထွေထွေဗဟုသုတများလေ့လာရန်။
http://www.kyawswarnyein.com/ = ကိုကျော်စွာငြိမ်း = ကွန်ပျူတာနည်းပညာများလေ့လာရန်။
www.kokyawmyintoo.blogspot.com/ = ကိုကျော်မြင့်ဦး= ကွန်ပျူတာနည်းပညာများလေ့လာရန်။
www.problemclean.ning.com/ = MYANMAR IT DEVELOPMENT= နည်းပညာအကြောင်းဆွေးနွေးဖို့။
www.simplehelp.net = မိမိကွန်ပျူတာနဲ့ ပတ်သက်၍ ပြဿနာများရှိခဲ့လျှင် မေးမြန်းနိုင်သည်
www.emailaccount.com = Domain များစွာကို စိတ်ကြိုက်ရနိုင်ပြီးလွယ်ကူသုံးချ အခမဲ့ရသော mail
www.gawab.com = Language များစွာကို စိတ်ကြိုက်ရနိုင်ပြီး လွယ်ကူစိတ်ကြိုက်ရနိုင်ပြီးလွယ်ကူသုံး ချ အခမဲ့ရသော mail
www.shareme.com = ကွန်ပျူတာပညာရပ်များ၊ စီးပွားရေးပညာရပ်များအပါအ၀င် ဆော့ဖ်ဝဲလ်များအကြောင်းစုံလင်စွာလေ့လာရန်
http://www.filehippo.com/ = စုံလင်တဲ့ Free Software ဆိုဒ်ပါ ။ လိုတဲ့ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကိုသာ နာမည်ရိုက်တဲ့ပြီးရှာလိုက်ပါ
http://www.picget.net = မိမိဓါတ်ပုံတွေကို ဘောင်ဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ အလှပြုပြင်နိုင်တဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပိုတိုဆောဖ့်ဝဲလ်တွေပါ
http://www.myanmartutorials.com/ = MYANMAR TUTORIALS= ကွန်ပျူတာနည်းပညာများလေ့လာရန်
www.engineer4myanmar.com/search/label/AutoCAD/ = ENGINEER4MYANMAR အော်တိုကတ်လေ့လာရန်။
http://www.mdasociety.com/ = MYANMAR DIGITAL ART SOCIETY= ဓါတ်ပုံနည်းပညာများလေ့လာရန်။
http://allmyanmarblogs.blogspot.com/ = ALL MYANMAR BLOGSမြန်မာဘလော့များရှာဖွေရန်။
http://webdirectory.all-channel.com/ = ALL CHANNEL = မြန်မာဆိုက်များကိုရှာဖွေရန်။
http://www.worldwidemyanmar.com/ = WORLD WIDE MYANMAR= နည်းပညာသတင်းများဖတ်ရှုရန်။
http://www.manorhary.com/ .:Manorhary:. The popular Author Novelist and Poet of Myanmar
http://www.knowledgewar07.com/ Blog,Computer,Books,Software တွေကိုအဓိက တင်ပြပေးပါမည်. ..
http://existencemgz.wordpress.com/ ဖွဲ့တည်ရာ မဂ္ဂဇင်း အကောင်းဆုံး မြန်မာစာပေ ဘလော့ဂ်ဆု
http://www.myawady.net/ Myanma Reference, tradition culture books : literature resources ...
http://www.yellowpagesmyanmar.net/ Myanmar Yellow Pages, Myanmar Exporters, Importers, Manufacturers ...
http://ebooks.mmblogs.net/ မြန်မာအီးဘွတ်များကို တစ်စုတစ်စည်း တစ်နေရာထဲမှာ ဒေါင်းလုပ် လုပ်နိုင်ရန်
http://www.myanmaryellowpages.biz/ Myanmar Yellow Pages - Myanmar Business Directory, Myanmar Telephone ...
http://weenyinthit.iblogger.org/ ၀ိညာဉ်သစ်စာအုပ်စင် နဲ့ ရောက်တက်ရာရာများ စာအုပ်များနှင့်သီချင်းလေးများ
စာပေဟောပြောပွဲများ Download Listen Now
မာမာအေး စာပေဟောပြောပွဲများ Download Listen Now
ဆရာမနုနုရည်(အင်းဝ) Download Listen Now
၂၀၁၁ – အောင်လံစာပေဟောပြောပွဲ Download Listen Now
၁။ ဆရာအော်ပီကျယ် ဟောပြောမှု
ဆရာမခက်မာ၏ဟောပြောမှု Download Listen Now
ဘ၀ထဲကစာများ – ၁
ဘ၀ထဲကစာများ – ၂
ဆရာမမေငြိမ်း၏ဟောပြောမှု Download Listen Now
စာဖတ်ခြင်းအနုပညာ – ၁
စာဖတ်ခြင်းအနုပညာ – ၂
၂၀၁၁ – မော်လမြိုင်စာပေဟောပြောပွဲ Download Listen Now
ရေးသားသူပြုစုသူ ကျော်ထက်ဝင်း နည်းပညာတက္ကသိုလ်-ဘားအံမြေ အချိန် 7:14 AM